စိတ်အယားပြေ ပို့စ်မဟာကြီး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » စိတ်အယားပြေ ပို့စ်မဟာကြီး
Posted by black chaw on Jun 13, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Photography | 60 comments
ယနေနံနက်ခင်း ကျွန်ုပ်သည် မန်းဂဇက်မှပေးသော SRTESS များအား ပြေပျောက်စေခြင်း အလို့ငှာ
ဂရန်းမီးရထား ဟောတယ်ကြီး၏ ကော်ဖီဆိုင်အတွင်း နံနက်စာစားခြင်းအမှုကို ပြုခဲ့ပါလေ၏။ ထိုအချိန်တွင်
မန်းဂဇက် ရွာသူားများ အထူးစိတ်ဝင်စားကြမည့် သတင်းဓါတ်ပုံ တစ်ပုံကို NOKIA 5800 ဖုန်းဟန်းဆက်ပါ
သတင်းမှာ မန်းဂဇက်မှ ဆရာရွှေတိုက်စိုး သည် မန်းဂဇက်မှပင်ဖြစ်သော ဆရာ ကြောင်ဝတုတ်၏ လည်ပင်းအား
ညှစ်ခါ နောက်လုပ်ဦးမလား ဟု ပြောလျက်သာရှိနေခဲ့ပါ၏။ ကြောင်ဝတုတ် မှာလည်း ရွှေတိုက်စိုး၏ ကြီးမားသော
ကိုယ်လုံးကိုယ်ပေါက် ကြောင့် ရုန်းထွက်ခြင်းငှာ မစွမ်းသာပဲ နောက်မလုပ်တော့ပါဘူးဗျ၊ ကြောက်ပါပြီဗျ ဟုသာ
သနားစဖွယ် အော်ဟစ်လျက်သာ ရှိနေပါ၏။
ရွှေတိုက်စိုး၏ ဒေါသ နှင့် ကြောင်ဝတုတ်၏ သနားစဖွယ်မျက်နှာ (ဓါတ်ပုံ မောင်မောင် ဘလက် - မန်းဂဇက်)
အင်း.. ခင်ဗျားတို့ ဒီပုံကို ကြည့်ပြီး အစားအသောက်ပျက်နေမှာစိုးလို့ ဒီတစ်ပတ်ထုတ် အန်ဗွိုင်းဂျာနယ်ထဲက ဓါတ်ပုံ မင်းချမ်းမွန် ရိုက်တဲ့
မော်ဒယ်လေး ဖူးပွင့်သခင် ရဲ့ ရေဆာရေငတ်စေမယ့် ဓါတ်ပုံလေးနဲ့ ဖြေဖျောက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒါလည်း မောင်မောင်ဘလက် – မန်းဂဇက် ရဲ့ NOKIA 5800 နဲ့ ရိုက်ချက်ပါဗျာ။
တကယ်လို့များ မောင်မောင်ဘလက် – မန်းဂဇက် နဲ့ ဓါတ်ပုံရိုက်ချင်သူတွေရှိပါက ဆက်သွယ်ကြပါရန်။
ဖူးပွင့်သခင် လေးရဲ့ မခို့တရို့ အလှလေးပါ။
ကဲ ..၊ စိတ်အယား နည်းနည်း ပြေသွားပြီမဟုတ်လား..။
အပေါ်က လူကြမ်းတွေတော့ မကြည့်ချင်ပါဘူးဂျာ
အဟီ ဖူးဖူးရင် ဖရဲကွယ်ရာမှာ ဆက်ဆီတွေ မရိုက်ပါနဲ့ကွယ်
ဟို စိုင်လေး ဒွေ ပစ် ချင်လို့ပါ ….
အာရကေပေါရင် စိုင်ကြီးစိုင်ငယ်စိုင်လတ် ပစ်လို့ရတယ်ဗျ
အပြန်မှာ နှစ်ယောက်စလုံးကို ထမ်းထုတ်ရတယ်ဆို ဟုတ်လားဟင်?????
လေဒီဘလက်က ဒုတ်ကောက်ခဲ့ပါတဲ့ ကိုဘလက်
အပြန်မှာ နှစ်ယောက်လုံးကို ထမ်းထုတ်ရတယ်ဆိုတာမှားပါတယ်…
ကျွန်တော်က ကိုတိုက်ကို ထမ်းပြီးသွားတာပါ…ဟီးဟီး…
ပိုစ့်ထဲမှာ အမြင်မတူကြ ချကြပေမယ့် အပြင်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့က သိပ်ချစ်ကြတဲ့သူငယ်ချင်းတွေပါ…
ကျွန်တော်ကလဲ ကျွန်တော့်အယူအဆနဲ့ကျွန်တော် ဂေဇက်ကို ကောင်းသောလမ်းပေါ်ရောက်စေချင်သူပါ…
လူတိုင်းအယူအဆကိုယ်စီနဲ့ မတူကြပေမယ့် အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် ကောင်းသောပန်းတိုင်သို့ မတူသောလမ်းက သွားကြတာဆိုတော့ နောက်ဆုံးကျပြန်တွေ့မယ့်သူငယ်ချင်းတွေပဲဗျာ… အရင်အတိုင်းချစ်လျက်…ခင်လျက်…ပါပဲ…
ဟယ် ဒီဓာတ်ပုံ ရိုဟင်ဂျာတွေ လက်ထဲ ရောက်သွားမှဖြင့်..
သူတို့ ဘင်္ဂလီကြောင်မျိုးကို အနိုင်ကျင့်နှိပ်စက်တယ် လုပ်နေအုံးမယ်နော်…
ကျွန်တော်က ဘင်ဂါလီကြောင်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး… N ကိုင်ရာအသင်းဝင်ကြောင်ပါဗျာ…ဟီး
ခေါင်းစဉ်လေးပြောင်းပေးပါလား ” ကြောင်သားချင်း စာနာထောက်ထားကြရာဝယ်”
ခုခေတ်မှာ မဖော်တဲ့ မော်ဒယ် ခေတ်မမှီတဲ့
မိန်းမ ၁၀ ယောက်မှာ ၈ ယောက်လောက်က မော်ဒယ်ဖြစ်ချင်နေကြတာ
ဒါကြောင့်လည်း ၃၇၆ အမှုတွေအရမ်းပေါနေတာ
အင်း မလွယ် မလွယ်
ဒါနဲ့ ကြားနေရတာ ကျော်ထွတ်ဆွေနဲ့နန်းသူဇာက ရည်းစားတွေဖြစ်နေပြီတဲ့
ဖော်နေတဲ့ မန်းလေးက ဘိန်းစားဖရဲ
“ဒါနဲ့ ကြားနေရတာ ကျော်ထွတ်ဆွေနဲ့နန်းသူဇာက ရည်းစားတွေဖြစ်နေပြီတဲ့” အဲဒါကြာဘီလေ ဘဘဖရဲ ရဲ့ အသေးစိတ်သိချင်ရင် FB မှာကြည့်။
လည်ပင်းညှစ်နေတဲ့ပုံက သိပ်မပီပြင်ဘူး ဘဘ ဘလက်
အူးလေး အန်ခယ်လ် ဘဘကြီး အူးဘလက်ခင်ဗျား..
ပုရွက်ဆိတ်အုံကို ရှူရှူးနဲ့ ပန်းသလို…
စိတ်ဒွေ ရွစိရွစိ ဖြစ်လာပြီခင်ဗျား..
ဆက်တော့ ဆက်သွယ်ချင်ပါတယ်။ အောက်က မော်ဒန်လိုတော့ သရုပ်မဆောင်တတ်တော့လည်း ခက်သားလားရှင်… မှတ်ပြီးလား ကြောင်ဝတုတ်..
ဒါတောင် မနော မလာသေးဘူးနော် မိတိုက်နဲ့ပဲ လွှတ်ထားလိုက်တာ…
အစ်မမနော မလာနိုင်သေးတာ …ကုလားမခြေထောက် လိုက်ဝယ်နေရလို့ပါတဲ့ … ခွိခွိ …. ။
(ပျော်လို့နောက်တာပါအေ …. စိတ်မဆိုးတတ်ဘူးဟုတ် )
ကိုကိုတိုက်ဒို့ ဂဒေါ့ တွေ့ ဒါနဲ့ညှစ်မယ်ဆိုဒါချီးဘဲ…..
ဟိုတစ်ခါလဲ တူရဂျော်ကိုညှစ်ပြီးတွားဘီ..( လည်ဘင်း )
အေးဒီတခါတော့ ညည်းအလှည့်ပဲ မတွေ.အောင်သာရှောင်ထား… ညည်းတော့ လည်းပင်းမညှစ်ဘူး…ဟွင်းဟွင်းဟွင်း
ခုလိုမြင်တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ် ဦးကြောင်။
ကျုပ်က ဘင်္ဂါလီကြောင်ဆိုးတင်မကဘူး Nကိုင်ရာ အသင်းဝင်… ဒါပဲ…
ဟာာာာာာာာာာာ …………. ဆင်ကျီစားတာ ဆိတ်မခံသာ ဆိုတဲ့ စကားပုံပြောင်းပစ်ရတော့မယ်ဟေ့ ….. ။
ရွှေတိုက်ရေ .. တွေ့တုန်း .. သူ့အိတ်ထဲက .. ဆင်လေးတွေကို အလှူငွေအဖြစ်နဲ့ နှိုက်ယူထားလိုက်တာမဟုတ်ဘူး …. ။ အလှူအတူလုပ်ကြရင်း … နောင်ဘ၀ရေစက်ဆုံတဲ့အခါ သူမပါလာမှာ စိုးလို့ … ဟိဟိ
အော်အစ်မရယ် အရင်တုန်းကတည်းက ပြောရောပေါ့… ပြောရဲအောင် ကျင့်ထားနော်… ဟဟဟဟဟဟ
ကျွန်တော်သာအလှူကို ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်ချင်ရင် တခြားအကောင့်တစ်ခုနဲ့ အခုထက်ပိုဆိုးအောင်ရေးမှာပေါ့…
နှစ်ရှည်လများတည်ဆောက်ထားတဲ့ ကြောင်ဝတုတ်ဆိုတဲ့နာမည်ကို ချရင်းတယ်ဆိုကတည်းက အကြောင်းအရင်း တစ်ခုရှိလို့ပါ…နောက်ကြုံတော့ပြောကြတာပေါ့နော်…
ကိုယ်က ပိန်ပိန်လေး မှတ်တာ
လူပျိုကြီးဆိုပြီး လူပြောများနေတာ …. ခုမှတွေ့ဖူးတယ်ဗျာ။
ဟိုရွှေတိုက်စိုးဆိုတာ က ကလေးနှစ်ယောက်အဖေဆို တာလား
အင်း ငယ်သေးတာပဲ .. အိမ်ထောင်ပြုစောတယ် ။
လေးစားပါတယ် နှစ်ယောက်စလုံး စာရေးကောင်းတယ်ဗျာ။
ဟုတ်ပ ကိုထက်ဝေးကြီး ဖော်ပေးတဲ့ မျိုးအောင်တယ်ဆိုတဲ့ဆေး သုံးလိုက်တာ အခုတော့ ငါ့အချစ်တွေ အရပ်နိုင်းဘူးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ဖြစ်နေပီ ဟဟဟဟဟ လူဆိုးကြီး….
သများကို မဦးမချွတ်တော် ဖွဟဲ့ဖြစ်ပါစေ မှန်ပါစေ တော်… ဟိဟိဟိ
အူးလေး တားကိုလည်း မျိုးအောင်တယ်ဆေးလေးပေးအုန်းနော်
အဟီး ခေါင်းစဉ်ကြည့်ပီး ၀င်ဖတ်မိပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေ့တွေ့ခြင်း အဆိုတော် ဘရိတ်ကီကို ဟော်တယ်က ၀ိတ်တာက လည်ပင်းညှစ်နေတယ်ထင်တာ။ ဆရာတွေ ဆိုလို့ အသက်ကြီးကြီး ခန့်ခန့်တွေ ထင်နေတာ ဘယ်ဘက်က ဆရာတစ်ယောက်က သမီးတူလေးလောက်ဘဲ ရှိမယ်ထင်တယ် အရမ်းငယ်ပြီးနုတယ်နော်။ ညာဘက်က ဆရာကတော့ ခန့်ပါတယ် ဒါပေမဲ့ လျှာကြီးထုတ်နေတာကြည့်ပြီး အသည်းယားတယ်….အဟင့် ခစ်ခစ် ဒါနဲ့ အဲဒီနေရာ သမီးရောက်ဖူးသလိုဘဲ နှစ်ခါလောက်ဘဲ ဆိုတော့ သိပ်မမှတ်မိတော့ဘူး။
အောက်က ပုံကတော့ သမီးတို့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေ အတွက် မသင့်တော်ပါဘူးရှင်…
ဟူး………ရာသီဥတုက ပူလိုက်တာ ၀တ်ထားတဲ့ ကြိုးတစ်ချောင်း စွပ်ကျယ်လေး ခဏချွတ်ဦးမှ။ စတာပါရှင် သမီးတို့က ပွင်းလင်းလို့ပါ
သြော် အခုလို ကြံကြံဖန်ဖန်တင်ပေးတဲ့ အရက်ပုလင်းနာမည်နဲ့ အစ်ကို့ကို ကျေးဇူးပါရှင့်။
သမီးလဲ ဓာတ်ပုံရိုက်တာ ၀ါသနာပါပါတယ် ဘယ်လိုများ ဆက်သွယ်ရမလဲ ပြောပြပေးပါရှင့်။
အမလေးလေး ပြောတော့ သမီးတဲ့ သများကိုကျတော့ သူ.တူလေးလောက်ဘဲရှိတယ်တဲ့… ဟေဟေ သများအသက်က ၃၅ နော်..ဒါဆို သမီးဆိုသူက ၅၀နားကပ်နေရောပေါ့ ဟုတ်လားဟင်……. ခိခိခိ
အဘတို့က နှလုံးအခံ ရှိလို့ပါ ကွယ်
We feel very nervous on the present situation of the riots.
This post make us ease and smile.
This may called taking care of the Mandalay Gazette readers.
Thanks Mr. Black.
ခွိ ခွိ .. လေးပေါက်တို့ အရီးလတ်တို့ ကစိုးရိမ်နေတယ် .. သူကြီးမလဲ မအိပ်ရဲဘဲ ညက ထကြည့်ရတဲ့ အဖြစ်ရောက်ပုံရောက်တယ် …
သူတို့ က ကော်ဖီအိုးတစ်လုံး အတူခွဲသောက်ပြီး လည်ပင်းညှစ်နေကြတယ် ။။
အလှုရှင်တွေက တော့ဆက်ဘဲံလှုရမလား ရပ်ဘဲ ရပ်နေရမလားယောင်ဝါးသွားတယ် ….
အလှုရှင်တွေရေ .. သူကြီးရဲ့ ငြင်းခုန်ခြင်း အနုပညာ အောက် မျော ပါမသွားလေနဲ့ ..
စာကစာ ..အလုပ်က အလုပ် ..ဆက်သာလုပ်.. :grin: :grin:
တယောက်ဂ တယောက်ရဲ့ အလယ်ဘင်းဂျီးဂို ညှစ်ထားတယ်
ခါတော်မှီ သဂျီးလိုချင်တဲ့ပုံကို ကွက်တိပဲ။
ကိုဘလက် ဘာမှ စဉ်းစာမနေနဲ့ –
အခုလို လိုချင်တဲ့ပုံ ကွက်တိ ရဖို့ မလွယ်ဘူး။
အဲဒီဓာတ်ပုံကို ဒေါ်လှ ၃၀၀၀ နဲ့ သဂျီးကို ရောင်းစားဖို့သာ လုပ်ပေတော့။ (မူရင်း-မောင်ပေ)
သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် ချစ်ခင်နေကြတာ ကို မြင်ရတော့ ၊ ချက်ချင်းဘဲ ကိုယ့်သောက်ဖော် တွေ ဆီ ဖုန်းဆက်ဖြစ်သွားတယ် ။ ကိုယ်တွေလဲ သွားဂလုဦးမယ် ။
မသွားခင် “ဖူးပွင့်သခင်” လေးကို တစ်ချက်သေချာ ထပ်ရှိုးတော့
ဗူကလေးနဲနဲပိုက်နေသလားလို့ ပါ ။
အော်ကပေ့နှယ့် ထမင်းစားများသွားလို.နေမှာပါအေ… ဟိဟိဟိ
ဟိုတခေါက်လည်း စိမ်းလန်းစိုပြေမှာလား မသိဘူး
အချစ်ကြမ်းရင် အညှစ်ကြမ်းတယ်… အဟီးးး
ညက တရေးနိုးကြီး ရန်ဖြစ်ဝုန်းဒိုင်းကြဲစာတွေဖတ်လိုက်ရတော့ ရင်တွေပန်းတွေတောင် တုန်တက်သွားတယ်
ပန်ပန်ရေ ရင်တုန်တာကတော့ ထားပါတော့ ပန်းတုံတာတော့ မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်နောာာာာာာာ အဟီးးးးးးးးး
ပန်ပန်ပန်.ပန်ပန်..ရွှေစင် သားသားကြိုက်တဲ့ ရွှေစင် ပန်.ပန်ပန်ပန်
ကျနော်တိုက်တဲ့ဘီယာနဲ့ ဖုန်းကင်စားပြီး အခုလို့တည့်သွားတာပါနော်။
ဟိုက် လေးပေါက် ကိုယ့်စကား ကိုတာဝန်ယူနော်…..ဘာတဲ့
“နောက်တစ်ခါရန်ဖြစ်တဲ့သူခေါ်ခဲ့ ဖုန်းကင် ကျွေးလွှတ်လိုက်မယ်”
လူတွေက ဟသာင်္၉သောင်းပျက်တာ ဇာတ်တူသားစားလို့တဲ့ သများတို့ကငတ်လို့ဟာကို
နှောက်တာ လေးပေါက်ရေ ခုတလော စိတ်ထဲ တော်တော်ပျော်နေပုံရတယ် ပေါက်ကရတွေဘဲ စဉ်းစားမိနေတယ်
သဂျီးများ သနားလို့ ပို့စ်ရေးခွင့် ပြန်ပေးမယ် ဆိုရင်ဖြင့် ကောင်းတာလေးဒွေဘဲ ရေးပါတော့မယ်ဗျာ…
ဒါပေမယ့် ရိုးရိုးရန်ဖြစ်တာ လေးပေါက်ဖုန်းကင်တော့ ကျွန်တော်စားမသွားဘူး…
အော် ဖြစ်ပုံ ဖြစ်ပုံ တို့များတော့ စိုးရိမ်လိုက်ရတာ ဘယ်လိုများဖြစ်တာတုန်းပေါ့…..အသာလုပ်ကြပါ ဆြာဒို့ရယ် တဂယ်ဘာ
ဆရာဟိန်းလတ်ရဲ့ စာအုပ်ထဲ ဖတ်ဖူးတာလေး…ဂေါ်ဘာချော့ဖ်နဲ့ ဂျော့ခ်ျဘွတ်ရ်ှကြီးတို့ အလွန်ခင်မင်ကြတယ် ဆိုဘဲ ဦးပြောင်ကြီး သမ္မတဖြစ်ချိန်မှာ ဘုရ်ှက စီအိုင်အေ အကြီးအကဲဗျ အဲကတည်းက သူတို့တွေ နားလည်မှုယူထားတယ် နောင်ဘုရှ် သမ္မတဖြစ်လာတော့ တဖက်နဲ့တဖက် မကောင်းကြောင်းတွေ ပြောကြရတယ် ပြောပီးရင်လည်း သူတို့မှာ ဖုန်းဆက်ပီး အပြန်အလှန် တောင်းပန်ကြ ရယ်ကြနဲ့ အတော်လေး အလုပ်ရှုပ်တယ်ဆိုဘဲ အခုလည်း ကြောင်ဘုရ်ှနဲ့ ဂေါ်ဘာတိုက်တို့ ဒီအချိုးချိုးတယ်ထင်ပ ဘာလင်တံတိုင်းကြီး အတွက်မဟုတ်တောင် လေတံတိုင်းကြီး ခေါ်မလား အလုပ်မဖြစ်တဲ့ အယူအဆ တံတိုင်းကြီးခေါ်မလား ဒါကြီးကို ဖျက်ကြတဲ့ သဘောပေါ့……လေးစားပါတယ်ဗျာ ခင်ဗျားတို့ရဲ့ စွမ်းအားတွေကို တကယ်ပါ…
ဒီနေရာမှာ ငြင်းစရာဖြစ်နေဦးမယ် ဆရာဟိန်းလတ် ရေးတာကို ကျနော်ပြန်ပြောတာ ဘာလင်တံတိုင်းကြီးကို သူတို့က ဖြိုဖျက်ခဲ့တယ်ဆိုဘဲ ပြောချင်တာက အဲအချိန် ကျနော်မမှီဘူးရယ် ဆိုတော့ တချို့များ သိတဲ့ တတ်တဲ့အပေါ် အသက်အရွယ်နဲ့စကားလုံးတွေ ပေါင်းပီး နောက်လူတွေကို နေ၀င်းစတင်း(ဘီအေ ၉၄၊ ၉မမ မောင်းပြန် အူဇီပုံစံ)နဲ့ ပစ်ချင်ကြတာ လူငယ်တွေ ကျော်တတ်ခွတတ်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေး…..
အခုလို အပုအကြီး အဲယောင်လို့ အဖြူအမည်း သဲကွဲစေလို့ ကျေးကျေးပါ လေးဘလက်ရေ
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်အား ဆန့်ကျင်သူ လေးဘလက်အား ထောက်ခံသူ
တော်တော် ဆိုးတဲ. ကလေးတွေ
စောတိပါ တိုချာမိ တားတားတို.က ဒီလိုပဲလေ.. ပို.စ်ထဲမှာရန်ဖြစ်ပေမယ့် အပြင်မှာ ခိခိခိ လုပ်နေကြ…
အမြင်မတူတော့လဲ ချရတာပေါ့ဂျ တိုချာမိရ……..
ဒါနဲ. တိုချာမိ ဘောပွဲကို ဘယ်လို ဖြောင်အောင်ကြည့်လဲဟင်…ဖြောင့်အောင်ကြည့်တတ်လားဟင် ဟီးဟီးဟီး……………..
ဘာပဲဖြစ်… ဘောပွဲနှစ်ပွဲ တစ်ပြိုင်ထည်းကြည့်လိုက်ရတယ်မဟုတ်လား…
တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက် အပြိုင်နွဲတာများကိုလေ
ကျက်သရေ ရှိလိုက်တဲ့ ပုံ (အပေါ်က ပုံကို ဆိုလိုပါသည်) ပါဘဲ ။
ဒီလို မျိုး ဖန်တီးပေးချက် လေးအတွက် ကျေးဇူးပါဘဲ ကဘချောရေ။
ကဲ – ခလေးနှစ်ယောက်
မက်ကျူးရား ဖြစ်ကြောင်း ရွာ ထဲကို သက်သေပြ လိုက်ပြီမို့ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း အကြီးကြီး ပါဘဲကွယ်။
သူ နဲ့ အုပ်ထိန်းသူလေး တို့ ငြင်းကြ၊ ခုံကြပြီ ဆိုပါတော့။
ပြီးရင် သူက ဒီလို ဘဲ သူမ ကို ?????????
သူမ ဆီက အကျင့်တွေ သူ ရလာတာဖြစ်မှာ အရီးရဲ့… :grin:
အဲ့ဒါကိုပြောရမယ်ဆိုလျှင် …. ရွှေတိုက် နားရွက်ရှည်ထွက်လာတာက စရမှာပဲ အရီးလတ်ရဲ့
ပုံထဲမှာကြည့်ပါဦး ……. နားရွက်ကြီး တဖက်ရှည်နေတယ် … ခွိခွိ
အဟင့် အရီးလတ်တော့ လုပ်ပြီ.. အုပ်ထိန်းသူနဲ.ငြင်းစရာကို မလိုတာ ငြင်းလဲ မငြင်းရဲပေါင်ဗျာ… တော်ကြာ ကိုယ်ပစ်ထားသွားမှ မရမကလေး ကုတ်ကပ် တွယ်ကပ်ထားရတာ… ဒီအရပ် ဒီအသက်နဲ. နောက်တစ်ယောက်ရှာဖို.ဆိုတာ ………. ဘုရားပေးတဲ့ချစ်သူလေးကို ခွိခွိခွိ…..
အရီးလတ်ကလဲ လည်ပင်းမညစ်ပါဘူး နားရွက်ပဲ ဆွဲလိမ်ပါတယ်ဆို ဟုတ်တယ်ဗျ…. မှတ်လဲမှတ်မထားဘူး ပြောရတာ ရှက်ထာအေ………. အဟင့်
သူ့ခမျာ… အဲဒီတစ်ယောက်ကမှမယူရင် အရပ်တူမရှိလို့ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲမထွက်ရဲ… လူပုံအလယ်တွဲမသွားရဲတဲ့ဘ၀ ရောက်မှာမို့ တော်တော်လေးဆင်ခြင်နေရရှာတာပါ… ခဏခဏနားရွက်ဆွဲခံနေရတော့လဲ နားရွက်ရှည်ရှည်ပုပုအကောင် နဲ့တူမှာစိုးလို့…ဟိ…
စကားအတင်းစပ် လို့ ဒုတိယ ပုံ ရဲ့ နောက် က စာတွေ က ဘာရေးထားတာလဲ။
တစ်ပိုင်းတစ်စ ဖတ်ကြည့်ရတာ တော့ ဘာတဲ့ ထုတ်မပြရင် ဘာဖြစ်မှာစိုးလို့ ဆိုလား။
ခုလိုအချိန်မှာ ပျော်စရာလေးတွေ ဖန်တီးပေးတာကျေးကျေးပါဗျာ..
တယောက်က အပေါ်ညှစ်ရင် ကျန်တယောက်က အောက်ပြန်ညှစ်မှ ညီတော့ပေမပေါ့…။
အရီး Khin Latt says: (Edit)
ဒီပုံလေးက အန်ဗွိုင်းဂျာနယ်ထဲမှာ ပါတဲ့ Sweet & Sexy ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်ကို
Sweet ဖြစ်ခြင်းနဲ့ Sexy ဖြစ်ခြင်းကြားထဲမှာ
Sexy ဖြစ်နေရင်တောင် ခံစားမှုကို ထုတ်မပြရင်
ဟုတ်မဟုတ်ကတော့ ဓါတ်ပုံဆြာတွေဖြစ်တဲ့ ဂီဂီတို့ ကိုမှော်တို့ ကိုသော့တို့ လုလင်တို့ သိမှာပါ ခင်ဗျာ။
ဟာဗျာ ..ကျနော် အဲ့လိုပုံတွေ မရိုက်တတ်ပါဘူးဗျာ…
ဟိုလူဒွေကို မေးပါ …
ဘုရားဖူးပီး ဘုရားဒါ့ပုံတွေ ရိုက်ပြန်လာတာ သိရဲ့သားနဲ့ကို
ဟိုတလောကမှ…… ကိုယ်ဟန်ပြမယ် တစ်ယောက်ကို အလှဒါ့ပုံတွေ၇ိုက်ပြီး…..
အမှူမပျတ်သေးပဲနဲ…….(ကြုံတုန်းလေး ၀င်နောက်ထှာနော် ချိတ်ချိုးနဲ့)
ဘာပဲ ရိုက်ရိုက်ကျွန်တော်ကတော့ ဖတ်သမားသက်သက်ပါဗျာ…..